काठमाडौं उपत्यकाका यी १३६ ठाउँमा भेटिए को’रोना सं’क्रमित – Sanchar Patrika
August 8, 2020 185
काठमाडौं, २४ साउन । काठमाडौं उपत्यकामा एउटै परिवारका सात जनासहित १ सय २४ जना को’रोना संक्र’मित थपिएका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले उपत्यकामा शुक्रबार एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढीमा संक्रम’ण पुष्टि भएको जनाएको छ । ईडीसीडीका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उत्तमकुमार कोइरालाका अनुसार पुष्टि भएकामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी उपत्यका बाहिरबाट आएका छन् । ‘त्यसमा पनि प्रदेश २ बाट आएकाको संख्या बढी छ । भारतबाट आएका पाँच जना छन्,’ कोइरालाले भने ।
शय्या अभावका कारण शुक्रबार पनि संक्र’मितमध्ये २५ जनालाई मात्र अस्पतालको आइसोलेसनमा पठाइएको छ । ६८ जना घरकै आइसोलेसनमा बसेका छन् । केही सम्पर्क’विहीन र उपत्यकाबाहिर छन् । ‘रो’गको उपचार गर्न अस्पताल भर्ना भएका केहीलाई त्यहीं बस्न भनेका छौं,’ कोइरालाले भने । शुक्रबार संक्र’मण पुष्टि भएकामध्ये ३४ जना महिला छन् । उपत्यकाको एक परिवारमा सात जनालाई सं’क्रमण भएको छ भने अर्को एक परिवारमा दुई जना संक्र’मित भएका छन् ।
लकडाउन हटेयता लक्षणसहितको संक्र’मितको संख्या पनि बढेको छ । उपत्यकामा शुक्रबार लक्षणसहितका संक्रमित ३० जना पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारसम्म उपत्यकामा ९ सय ८२ जनामा को’रोना देखिएको छ । तीमध्ये काठमाडौंमा ७ सय ६६, भक्तपुरमा ८२ र ललितपुरमा १ सय ३४ जना छन् । ६ सय ४६ जना सक्रिय संक्रमित हुन् । मन्त्रालयले काठमाडौंसहित ६ जिल्लालाई जोखि’ममा राखेको छ । साउन १ देखि १२ सम्म उपत्यकामा दिनहुँ १६ जनाभन्दा कम संक्र’मित थपिएका थिए ।
साउन १३ मा एकै दिन ६१ जनामा संक्रम’ण पुष्टि भएको थियो । दिनमा ५० जनाभन्दा बढी संक्र’मित थपिन थालेपछि आइसोलेसनमा राख्ने शय्याको अभाव हुन थालेको छ । ईडीसीडीको सं’क्रमित व्यवस्थापन गर्ने टोलीले घरमै आइसो’लेसनमा बस्न चाहनेलाई अनुमति दिने गरेको छ । उनीहरूलाई स्थानीय तहका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले निगरानी गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांशलाई निग’रानी नगरिएको गुनासो छ । बुधबार संक्र’मण पुष्टि भएका १ सय २ जनामध्ये २० जना घरमै आइसो’लेसनमा बसेका थिए । बिहीबार पनि ८१ जना सं’क्रमित देखिएकामा ४० जना प्रहरी र तिनका आफन्त प्रहरी अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखिएको छ । अरू घरमै छन् ।
संक्र’मित भर्ना गर्न तोकिएको अस्पतालको शय्या खाली नभएपछि कीर्तिपुरको आयुर्वेद अस्पताललाई दुई सय शय्यामा विस्तार गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए । तर ती प्रयोगमा आइसकेका छैनन् । त्यस्तै, छाउनीस्थित सैनिक अस्पताल र महाराजगन्जको प्रहरी अस्पताललाई पनि लेबल २ को अस्पताल बनाउने निर्णय मन्त्रालयले गरिसकेको अधिकारीले जानकारी दिए । तर सेनाले सैनिकलाई मात्रै र प्रहरीले आफ्नो संगठनभित्रका संक्र’मित मात्र भर्ना गर्ने भनेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
Prevराष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा प्रकाशन गर्ने काम अन्तिम चरणमा
Nextघर वा जमिन किन्ने इच्छा पुरा हुने छ ७ शनिबार यसो गर्नुहोस्,
यो देशमा हरेक तीन वर्षमा गाडेको ठाउँबाट निकालिन्छ शव !
नवलपरासीमा फेन्सी पसलमा आगलागी हुँदा कपडा जलेर नष्ट